Oniversite Maninday : Nofefen’ireo mpianatra ny lakilasy – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2021 → octobre → 14 → Oniversite Maninday : Nofefen’ireo mpianatra ny lakilasy
Mafana ny toe-draharaha eny amin’ny oniversite Maninday Toliara ankehitriny. Mitohy hatrany ny fitakian’ireo mpianatra eny Maninday amin’ny hamoahana tsy misy hatak’andro an’ Atoa Martial, izay filohan’ny fikambanan’ny mpianatra nosamborina ny alahady 3 oktobra lasa teo, ary taorian’izay ity mpitari-tolona eny amin’ny anjerimanontolo Maninday ity no naiditra am-ponja. « Tsy hijanona ny hetsika ataonay mpianatra raha tsy mivoaka i Martial », hoy ireto mpianatra. Mariky ny tsy fifaliana misy, mba hasehon’izy ireo amin’ny tompon’andraikitra mahefa isan’ambaratongany, dia nofefen’ireo mpianatra tsilon-draketa ny varavaran’ny efitrano fianarana rehetra eny amin’ny oniversite Maninday. Nasian’ireo mpianatra barazy ihany koa ny vavahady miditra ao Maninday.
Fivarotana voatafika, lasa ny 38 tapitrisa ariary
Nanao sesilany ny fanafihan-jiolahy nitam-piadiana tao Andohan’ Ilakaka, Distrikan’ Ihosy ny fiandohan’ity herinandro ity. Ny alatsinainy tolakandro teo, tokony ho tamin’ny roa ora, tranombarotra iray ao amin’ny Fokontany Mangarahara no notafihana roalahy nitondra basy, ka voaroba tamin’izany ny lelavola 38 tapitrisa ariary. Raha ny vaovao voaray, handeha hanao petra-bola eny amin’ny banky ny tompon’andraikitra tao amin’ity magazay ity no tonga tampoka ireo jiolahy, ary nandrahona mafy ireto farany : « omeo anay iny vola iny raha tsy te-ho faty anareo. » Niantso vonjy ireo voatafika, nefa tsy nisy sahy nanatona ny olona teo amin’ny manodidina raha vao nahita an’ireto jiolahy nandrangaranga basy mahery vaika.
Adin’ny mpivady, maty ny lehilahy
Tsy fanaka malemy intsony ny vehivavy sasany ankehitriny, fa mahavita mihitsy mandatsaka ny ainy vady andefimandriny ! Trangam-piarahamonina nahavalalanina sy nampivarahontsana ny maro no niseho tany amin’ny Fokontany Morafeno, Kaominina ambanivohitra Bevontro, Distrikan’i Sambava. Vokatry ny fifamaliana nisy teo amin’ny mpivady, raim-pianakaviana iray mbola tanora erotrerony no maty nihosin-drà notsatohan’ny vadiny tamin’ny antsy, afak’omaly tolakandro, tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany. Tsy hay izay tena antony mazava nitarika ady saritaka teo amin’ireto mpivady, hoy ny Sefo Fokontany, nampita ny vaovao taminay, fa tezitra mafy ramatoa raha nifamaly izy mivady, ka tsy nisalasala ity renim-pianakaviana ity namono nahafaty ny vadiny. Fotoana fohy taorian’ity vono olona ity, voasambotry ny mpitandro filaminana ilay ramatoa nahavanon-doza. Ny razan’ilay lehilahy namoy ny ainy kosa efa nalain’ny fianakaviany. Raha ny fantatra, namela kamboty lahy kely telo taona ireto mpivady.